“ ထူးခြား မူခြား ဥပဒေ အထက်က လက်တစ်လုံးခြား ဆန္ဒပြပွဲ” - News @ M-Media
in သူ့အမြင် — May 26, 2017
သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကိုအား၊ ကန့် ကွက်ရှုတ်ချသည့် ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကို နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်ရှိ၊ ရွှေနံ့သာရပ်ကွက် ဘောလုံး ကွင်း၌ မေလ ၂၀ရက်၊ မနက်၉နာရီမှ ၁၁နာရီထိ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို Sky Net ရုပ်သံမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသသည်ကို စာရေးသူကြည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စနစ်တကျ၊အချိန်ယူ၊ကြိုတင်ပြင် ဆင်ထားပြီး အသွား၊အပြန်၊ကြိုပို့ စီစဉ်ပေးထားမှု၊ခရီးစရိတ်ငြိမ်း ဝန်ဆောင်မှု အစုစုတို့ကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန် ပြည်နယ်တို့မှ မဘသသံဃာတော်၊လူပုဂ္ဂိုလ် ၃၀၀၀ လောက်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ကားစီးရေ တော်တော်များများ စီစဉ်ပေးခဲ့ဟန်ရှိကြောင်း မီဒီယာသမားတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုဆန္ဒပြပွဲကို “မြန်မာ့အံ့ဖွယ်” ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုလို့ပြောနိုင်ပေသည်။ အကြောင်းမှာ ၂၀၀၅ခုနှစ် နေပြည်တော်မြို့ တည်ကတည်းက အစိုးရခေတ် အဆက်ဆက်တွင် မည်သည့်လူ၊ပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်းကိုမျှ တာဝန်ရှိသူများက ဆန္ဒပြခွင့် မပေးခဲ့ဘဲ ခွင့်ပြုခဲ့သောကြောင့် မြန်မာပြည်သူလူထုများအကြား ခွင့်ပြုခဲ့သည့် နေပြည်တော် အာဏာပိုင်ဆိုသူ များကို မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ “သို့လော၊သို့လော” ရှိခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် ထူးဆန်းသည်မှာ နေပြည်တော်တိုင်း အမျိုးဘာသာ၊သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့(မဘသ) အတွင်းရေးမှူးဆရာတော်က “ ထိုဆန္ဒပြပွဲလုပ်ဆောင်မှု့သည် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိ”ဟု မိန့်ကြားထားခဲ့သည်။ ထိုဆန္ဒပြပွဲတွင် တစ်ချိန်က ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားပြု အမျိုးသားလွှတ်တော် အမတ်ဟောင်း ဦးလှဆွေ၊ ဦးဇန္ဒိတ၊ ဦးအေးမင်းထွန်း၊ ဦးစိုးထွန်းရွှေ၊ မဘသအတွင်းရေးမှူးရှေ့နေ ဦးအေးပိုင်တို့က ဟောပြောခဲ့ပြီး ကြွေးကြော်သံများ ပြုကာ ဦးဝီရသူ တရားဟောခွင့်ရရေး၊ ဦးဝင်းကိုကိုလတ်အား လွှတ်ပေးရေး ပါဝင်သော တောင်းဆို ချက် (၈)ချက်ကို တစ်လအတွင်းလုပ်ဆောင်ပေးရန် သို့မဟုတ်ပါက နိုင်ငံအနှံ့သပိတ်တိုက်ပွဲများ ဆင်နွှဲမည်ဖြစ်ပါကြောင်း လက်ရှိအစိုးရအား ရာဇသံပေးခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြပွဲတွင် ဦးလှဆွေက “လက် ရှိအစိုးရအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအားပေးချီးမြှောက်ခြင်း မရှိသည့်အပြင် လူနည်းစု ဘာသာများကို ချီးမြှင့်မြှောက်ပေးခြင်း၊ ခေတ်အဆက်ဆက်၊ အစိုးရလက်ထက်တွင် သံမတန်ဆက်သွယ်ခြင်း မရှိသည့် “ဗာတီကန်” (ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းချုပ်)နှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ် ပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်း၊ မြန်မာနောင်း (Myanmar Now )အယ်ဒီတာချုပ်အမှု့တွင် တရားရေး မဏ္ဏိုင်ယိမ်းယိုင်စေရန်အ တွက် သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောထားမှတ်ချက်ပေးခဲ့ခြင်းများကို” ဝေဖန် ထောက်ပြကာ သူ့အမြင်ကိုတင်ပြသွားခဲ့ပေသည်။
စာရေးသူအနေဖြင့် တင်ပြလိုသည်မှာ ၂၀၁၀ခုရွေးကောက်ပွဲတွင် ဦးလှဆွေနှင့်ကိုယ်စား လှယ်များကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုခဲ့သော ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ဖွဲ့စည်းပုံ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ
၃၆၁ ။ တွင် နိုင်ငံတော်သည် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသားအများဆုံး ကိုးကွယ်ရာဖြစ် သောဂုဏ်ထူးဝိသေသနှင့်ပြည့်စုံသည့် ဘာသာ၊သာသနာဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတော်က အသိအမှတ် ပြုသည်။
၃၆၂ ။ နိုင်ငံတော်သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာနှင့် နတ်ကိုးကွယ် ဘာသာတို့ကို ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အာဏာတည်မြဲသောနေ့တွင် နိုင်ငံတော်တွင်ရှိနေကြ သော ကိုးကွယ်ရာဘာသာများဟူ၍ အသိအမှတ်ပြုသည်။
၃၆၃ ။ နိုင်ငံတော်သည် အသိအမှတ်ပြုထားသော ဘာသာ၊သာသနာများကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီစောင့်ရှောက်မည်။
စသည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အချက်အလက်များကို အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တစ်ဦးအနေဖြင့် ၅နှစ်သက်တမ်းတာဝန်ထမ်းစဉ်က မလေ့လာခဲ့ဖူးလေသလား? ဒီအပြင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့၏ လက်ဝါးကတ်တိုင်များ၊ချားခ်ျခရစ်ယာန် ကျောင်းများ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ ဝတ်ပြုဆုတောင်းရာ ဗလီများ၊ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ ကျမ်းစာ သင်ကြားရာ၊ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းများကို ၁၉၆၂ ခု မတ်လ ၂ ရက်တွင် စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့ သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းလက်ထက်မှ နဝတ စစ်အစိုးရ ၊နအဖ စစ်အစိုးရ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ နှင့် ပြည်သူ့အစိုးရ NLD လက်ထက်ထိ မည်သည့်မြို့နယ်၊ မည်သည့်ကျေးရွာ၊ ရပ်ကွက်တွင်မဆို တရားဝင်တည်ဆောက်ခွင့်ပြုထားများရှိခဲ့ပါသလား?
ဒါမှမဟုတ်ရင် တပ်မတော်မှာ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ဦး အနေနဲ့လည်းကောင်း၊၂၀၁၀-၂၀၁၅ မှာ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးအနေနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အခွန်စားဖူးတဲ့ သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေး အစွန်းရောက် ရင်တွင်းဖြစ် ခံစားချက်များကို လျှာရိုးမရှိဘဲ စင်ပေါ်တက်ကာ အထိမ်းအကွပ်မရှိဘဲ ဟစ်နေခြင်းသည် ဦးနှောက် ရှိသော ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ် စာရင်းဝင်သွားပေလိမ့်မည်။
မြန်မာပြည်တွင် ပြည်သူလူထုခံစားနေရသော အလုံးစုံဒုက္ခမျိုးစုံကို ထပ်တူထပ်မျှခံစားပြီး ပြည်သူ့ဘက်က မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ကာ နအဖစစ် အာဏာရှင်များလက်ထက် ၂၀၀၇ ခုတွင် လမ်းများပေါ်ထွက် မေတ္တာသုတ်များရွတ်ဆိုကာ ကိုယ်ကျိုးစွန့်လွှတ် အသက်စွန့်ပျံလွန်တော်မူ သွား သော သံဃာတော်များအား စာရေးသူ ယနေ့တိုင် အမျှဝေနေမိသည်။ ထူးခြားသည်မှာ ဥိးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်တွင် လူတစ်စု၊ လူမျိုးနွယ်တစ်စု၊ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာတရားတစ်ခုကိုအခြေခံ ကာ သံဃာတော်အုပ်စုတစ်ခုပေါ်လာခဲ့သည်။ ထိုအုပ်စုကို တစ်ချိန်က အာဏာရပါတီကြီးတစ်ခုနှင့် ပြည်သူမလိုလား ခရိုနီများက အပြည့်အဝထောက်ခံရုံ သာမက ထောက်လှမ်းရေးပြုတ်များ အငြိမ်းစား စစ်အရာရှိအချို့က မဟာဗျူဟာ ရေးဆွဲပေးကြသည် ဟုမြန်မာ့အရေးနှောကြေနေသူ သတင်းစာဆရာ Bertil Lintner က ဘန်ကောက်ပိုစ် တွင်ရေးသားခဲ့ဖူးသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း လူသားဝါဒအခြေခံပြီး ပြည်သူနှင့်ရင်ဘတ်ချင်းတူပြီး အမှန်တရားလက် ကိုင်ထား ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် သံဃာတော်များက မေလ ၂၀ရက်တွင် “ အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေး ဝါဒီများ၏ ဟောပြောချက်များ ရေးသားချက်များသည် ပဋိပက္ခအသွင် သဏ္ဍာန်သို့ ဖန်တီးသိမ်းသွင်းရာ ရောက်သဖြင့် တောင်ပေါ်ဒေသ မြေပြန့်ဒေသရှိ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် သိရှိနားလည်ပြီး ကန့်ကွက် ရှုတ်ချ၍ မိမိတို့၏ သားသမီးများပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိစေရန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။” ထို့အပြင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံ တော် သံဃမဟာနယက အဖွဲ့က ဓမ္မစက်ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားလွှာများကို အာဏာစက်ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဝိနိ စ္ဆယများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင် သော ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ အခန်း၂၀ အရ အချိန်နှင့်တပြေးညီအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း “ဆရာတော်ဦးပဏ္ဏဝံသ ပါဝင်သော သံဃာတော် (၁၅)ပါးက သဘောထား ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
Generation Wave အဖွဲ့မှ ကိုမိုးဃ်သွေးကလည်း “လက်ရှိ မြန်မာပြည်မှာ အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးဝါဒီလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ ဟောပြောမှု့တွေ၊အမုန်းတရားဖြစ်စေတဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်စေတဲ့ လှုပ် ရှားမှု့တွေ အများကြီးဖြစ်နေတယ်။ ဒါတွေကို ဝိုင်းဝန်းကာကွယ် တားဆီးဖို့ ရှုတ်ချကန့်ကွက်ဖို့ ရွှေ ဝါရောင်သံဃာတော်တွေက နှိုးဆော်တာကို ကျွန်တော်တို့က သဘောတူတယ်” ဟုပြောဆိုသွားခဲ့ပါ သည်။
မေလ ၂၀ ရက် နေပြည်တော်ဆန္ဒပြပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ဘီဘီစီသတင်းထောက်၏အမေးကို နိုင်ငံရေး အကဲခတ်တစ်ဦးက ဖြေကြားရာတွင် “သာမန်ဆန္ဒပြပွဲ လာလျှောက်တော့ အင်အား ၃၀၀ စာရင်းပြတယ်။တကယ်လာတာက ၃၀၀၀ ကျော်တယ်။ အဲဒီမှာတင် တည်ဆဲဥပဒေကို ချိုးဖောက် နေပြီ။ ဒါကတစ်ချက်။ ရဲတွေက ဆန္ဒပြလာတဲ့သူတွေကိုတည်းခိုစရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ ဘုရားဖူးတွေ လိုက်ပို့တယ်။ ဒါက ဒုတိယတစ်ချက်။ နောက်ဆုံးအချက်က ဥပဒေချိုးဖောက်တာကို အရေးမယူပါဘူးလို့ နေပြည်တော် ရဲမှူးဦးအောင်သန်းက ဖြေဆိုခဲ့သည်။ တကယ်လို့ ဗကသ ကျောင်းသားတွေက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး နှုတ်ထွက်ပေးရေးအတွက် နေပြည်တော်ကိုလာပြီး ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင် “မဘသ”အဖွဲ့တွေလို အခွင့်အရေးပေးမလား? ဒီနေပြည်တော်ဆန္ဒပြပွဲကို ကြည့် တာနဲ့ “မဘသ” အဖွဲ့ဟာ အခွင့်ထူးခံဖြစ်နေတယ်။ ဥပမာ ဦးဝီရသူလို အစွန်းရောက် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ အရေးယူ မခံရသေးဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ရာဇဝတ်မှု့တွေ တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုတိုးပွားလာနေတယ်။ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မှာပြဿနာရှာတဲ့ ဘုန်းကြီးနဲ့မျိုးချစ်ဟန်ပြတွေကို ဖမ်းတာ သာဝန်မဟုတ်။ ပြည်ထဲရေးပါ။ ကျောင်းသားတွေ၊လယ်သမားတွေ၊ အလုပ်သမားတွေ ဆန္ဒပြတုန်းက “မဘသ”တွေလို တည်းခိုစရာ မရတဲ့အပြင် အရိုက်တောင်ခံရသေးတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပင် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အခွင့်အရေးရနေကြတာ တွေဟာ မျှတမှု့မရှိဖြစ်နေကြတယ်။ ဥပဒေဆိုတာဟာ စာအုပ်ထဲမှာပဲရှိတာပါ။ လက်နက်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေရဲ့ ပါးစပ်က ထွက်တာဟာ ဥပဒေပါ။ “ဖမ်းချင်၊ဖမ်းမယ်။ မဖမ်းချင်၊မဖမ်းဘူး ဘယ်သူမျှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူး” စသည့်အတွေးများ ပြည်သူများကြား ပြန့်နှံ့ ကျင့်သုံးမိရင် ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းစဉ်မှာ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ပျောက်ကွယ်သွားမည်သာဖြစ်သည်။
အချုပ်ဖြင့်ဆိုရလျှင် တစ်ချိန်က အတ္တလောဘစိတ်မွန်ကာ လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်၊ ဘာသာရေးမုန်းတီးရေး လက်ကိုင်ထားကာ အမျိုးသားရေး ဟန်ရေးပြကာ မြန်မာပြည်သူလူထု၏ အများပိုင် မြေပေါ်၊မြေအောက်၊ရေပေါ်၊ရေအောက် တွင်းထွက်သံယံဇာတများကို သူခိုးဈေး၊ အောက်ဈေး၊ညှိနှိုင်းဈေး၊ အတွင်းလာဘ်စည်းများ၊အပြင်လာဘ်စည်းများထားကာ နိုင်ငံတော်ဘ ဏ္ဍာတော်များ (အနှုတ်)ပြ ကြွေးမြီးခံဘဝရောက်သွားအောင် လုပ်ခဲ့သော အစိုးရနျင့် လက်ဝေခံ လက်တစ်ဆုတ်စာ လူတစ်စုကို ဆန့်ကျင်နေသူများသည် နိုင်ငံတော်၏သားကောင်းရတနာများ ဖြစ်ကြပေသည်။ တိုင်းပြည်၏ဘဏ္ဍာငွေများကို ကိုယ်ကျိုးမဖက် မခိုးမဝှက်ဘဲ နှစ်၅၀ကျော် ပျက်ဆီးနေသော အာဖရိကတိုက်ရှိ အီသီယိုးပီးယားအောက်ရောက်သွားခဲ့သော နိုင်ငံအား ဒိုးဒိုး ဒေါင်ဒေါင်ဖြစ်အောင် အသက် ၇၀ ကျော် အဖွားအိုကြီးဦးဆောင်သော အစိုးရအား ဖျက်လိုဖျက်ဆီး မျက်စိစုံမှိတ် ဆန့်ကျင်နေသူများကို ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန်အောင် ပြည်သူလူထုနှင့်အတူ တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ဆန့်ကျင်ကြပါစို့လို့ အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
Tags: MaBaTa, opinion, သူရဦးအောင်ကို